कुन अस्पताललाई कति सिलिण्डरको कोटा ? (सूचीसहित) - Global Awaj | No 1 News Portal from Nepal in Nepali
नेपाली क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण शुरु
काठमाडौं । कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी) ले काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेका कोभिड अस्पताल एवं आइसोलेसन केन्द्रका लागि दैनिक अक्सिजनको कोटा निर्धारण गरेको छ । बुधबारबाट लागू भएको उक्त कोटाअनुसार उपत्यकाका ८ वटा अक्सिजन उद्योगले १११ अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टरका लागि ७ हजार ४७३ वटा ठूलो सिलिण्डर अक्सिजन आपूर्ति गर्नुपर्नेछ ।
अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टरबाट सीसीएमसीलाई प्राप्त मागका आधारमा ती उद्योगहरुलाई दैनिक न्यूनतम कोटा तोकिएको र उक्त परिमाणको अक्सिजन जसरी पनि आपूर्ति हुनुपर्ने सीसीएमसीको सचिवालयले जनाएको छ । केन्द्रले निर्धारण गरेको कोटाअनुसारको अक्सिजन उपलब्ध गराउनुपर्ने र नसक्ने अवस्था रहे तत्कालै केन्द्रलाई जानकारी गराउन उद्योगहरुलाई सीसीएमसीले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ । सीसीएमसीले तोकेको कोटाअनुसार अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टरलाई न्यूनतम १० देखि बढीमा ३०० वटा सिलिण्डर दैनिक रुपमा उपलब्ध गराइएको छ ।
पाँच अस्पताललाई दैनिक ३०० सिलिण्डर
अस्पतालहरुको मागका आधारमा सीसीएमसीले पाँच वटा अस्पताललाई दैनिक ३०० वटा ठूलो सिलिण्डर अक्सिजन उपलब्ध गराउन अक्सिजन उद्योगहरुको कोटा तोकेको छ । जसअनुसार ललितपुरको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सगरमाथा अक्सिन प्रालि पाटनले कोटाको अक्सिजन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
हाम्रो अक्सिजन प्रालि ककनीले शसस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुलाई दैनिक ३०० वटा सिलिण्डर आपूर्तिको गर्नेछ । यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज र धुलिखेल अस्पताल काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई नवज्योति अक्सिजन प्रालि बनेपाले कोटोको अक्सिजन आपूर्ति गर्नुपर्नेछ । यस्तै ललितपुरको निजी अस्पताल मेडिसिटीलाई सोपान अक्सिजन लुभुले दैनिक ३०० सिलिण्डर अक्सिजन आपूर्ति गर्ने कोटा तोकिएको छ।
९ अस्पताललाई २०० देखि २५० सिलिण्डर अक्सिजन
सीसीएमसीका अनुसार उपत्यकाका तीन वटा अस्पताललाई दैनिक २५० वटा ठूलो सिलिण्डर उपलब्ध गराउन अक्सिजन उद्योगहरुलाई कोटा तोकिएको छ । नेपाल ग्रिन सिटी अस्पताल धापासी, नेपाल मेडिकल कलेज अस्पताल अत्तरखेल र काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगललाई सो परिमाणमा अक्सिजन उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, ह्याम्स, नेपाल प्रहरी अस्पताल, नर्भिक अस्पताल र स्टार अस्पताललाई दैनिक २०० वटा ठूलो सिलिण्डर अक्सिजन उपलब्ध गराउन सीसीएमसीले उद्योगहरुलाई भनिएको छ ।
उत्पादन क्षमताअनुसार अस्पतालको कोटा
सीसीएमसीले अक्सिजन उद्योगको उत्पादन क्षमता र उद्योगको अवस्थितिको आधारमा अस्पतालहरुको संख्या र अक्सिजन कोटा निर्धारण गरेको जनाएको छ । हाम्रो अक्सिजन उद्योग ककनीलाई सात वटा अस्पतालाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन भनिएको छ भने हिमाल अक्सिजनले १२ वटा अस्पताललाई अक्सिजन उपलब्ध गराउनेछ ।
कान्तिपुर अक्सिजन हरिसिद्धिलाई १९ वटा अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्तिका लागि कोटा तोकिएको छ भने ११ वटा अस्पताललाई नवज्योति अक्सिजन उद्योग बनेपाले अक्सिजन आपूर्ति गर्नुपर्नेछ । ११ अस्पताललाई अक्सिजन उपलब्ध गराउन सगरमाथा अक्सिजनलाई कोटा तोकिएको छ भने २२ अस्पताललाई शंकर अक्सिजन उद्योग बालाजुले अक्सिजन सप्लाई गर्नुपर्नेछ। यस्तै चाल्नाखेलमा रहेको सीता अक्सिजन प्रडक्टले १९ अस्पताल र सोपन अक्सिजन उद्योगले ९ वटा अस्पताललाई अक्सिजन आपूर्ति गर्नुपर्नेछ ।
९ असार २०७८, बुधबार ११:०८
निषेधाज्ञामा घरभाडा छुटः बजेटको घोषणा कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?
८ असार २०७८, मंगलवार १४:५५
खुकुलो भयो निषेधाज्ञा, ट्राफिकले मुख्य सडक छेक्दा काठमाडौंमा जाम
८ असार २०७८, मंगलवार १३:००
जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगले ठाकुर पक्षसँग माग्यो लिखित जवाफ
७ असार २०७८, सोमबार १७:१५
७ असार २०७८, सोमबार १७:०२
योगको उत्पत्ति भारतमा भएको होइन, भारतीय विद्वानले तथ्य लुकाउँछन् – प्रधानमन्त्री ओली
७ असार २०७८, सोमबार १६:५३
७ असार २०७८, सोमबार १४:५८
सबै नागरिकका लागि यथाशीघ्र खोपको व्यवस्था गर्न राष्ट्रपतिकाे निर्देशन
७ असार २०७८, सोमबार १३:५७
नेपालमा कोरोनाको नयाँ प्रजाती भेटियो ,थप सचेतता अपनाउन आग्रह – स्वास्थ्य मन्त्रालय
७ असार २०७८, सोमबार १३:५२
पर्सामा पनि निजी सवारी साधन जोर बिजोर प्राणालीमा सञ्चालन हुने
७ असार २०७८, सोमबार १३:३७
९ असार २०७८, बुधबार ११:२३